Unogona kunge uchishamisika kuti vagadziri vanoziva sei mafoni avanogadzira. Pane imwe mhando yenhamba dzenhamba dzinosiyanisa maviri mafoni parutivi? Chaizvoizvo, zviripo.
Chii chinonzi IMEI?
IMEI, kana International Mobile Equipment Identifier, ndeyekuzivikanwa kwakasiyana pese pafoni. Chaizvoizvo, inobvumira vanogadzira kuti vatevedzere kuti ndeipi foni iyo, kunyanya sezvo paine akawanda maPhones kana Samsung Galaxy mafoni ari munyika.
An IMEI inowanzove ine manhamba e14, ine 15th digit iyo inova nechokwadi chekuti tambo yacho iri chokwadi. Maitiro ehuwandu akajeka. Kune mamwe mimwe IMEI misiyano ine 16th digit, zvakadaro. Asi kune akawanda mafoni mahombe, ingori 15 digit kusiyanisa kwaunozoona. Uine anopfuura 4 mabhiriyoni mafoni epasi rese nhasi, zvakakosha kuti uzive yako IMEI, kana kuti uzive kwaungaiwana kupi.
Izvi zvinobhadhara kunyanya kana iwe uchigadziriswa foni yako. Iwe unogona kushamisika kuona kuti yako "yakagadziridzwa" foni haisi iyo imwechete yawaimboshandisa kare (nekuda kwezvinhu zviri nani kana kuti zvakaipisisa)! Uye kuti uite izvozvo, ini ndichakubatsira iwe pakutsvaga izvo izvo IMEI yako iri kuburikidza nefoni yako.
Saka tora chishandiso chako, uye tichave tichiita zvishoma kugadzirisa kwezvinhu kuti uwane IMEI yako. Ndapota cherekedza kuti sezvo paine akawanda mafoni akasiyana, uye imwe neimwe ingave nematanho akasiyana. Ndichaedza kuva akakwana sezvandinogona, asi zvakajairika, nzira yekutsvaga yako IMEI ingave yakafanana. Izvo ndezvekuti mazita nekuiswa kwakasiyana.
Nzira yekuwana yako IMEI
Ingo fonera * # 06 # kuti utore yako IMEI nhamba.
Oppo F5 (Uye mamwe mafoni eOppo)
Ngatitangei neOppo F5, iri runhare rwakakurumbira izvozvi. Mazhinji mafoni eOppo ane maitiro akajairika (ayo akafanana neye iPhone) saka matanho pano achanyanya kushanda kune ese maOppo mafoni nemaPhones.
Kutanga yako IMEI trace, enda kune ako mafoni Zvirongwa. Iyo ndiyo inoita kunge chiratidzo chegear
Paunenge uchinge uchinge uri pachiratidziro chekuisa, ungangoda kupurudzira pasi kusvikira wawana Nefoni
Mu About About Screen Screen, unogona kunge uchitoona iyo IMEI, zvisinei, iyo Oppo F5, iwe uchafanirwa kupururudza pasi uye kutsvaga chinzvimbo
Paunenge iwe uchinge uri mune Status skrini, iwe uchaona iyo IMEI yefoni yako. Kana iwe uine maviri maviri sim inogonesa smartphone, saka uchaona 2 pairi yeIMEI nhamba
Tarisa uone IMEI yako nezvezvinangwa zveramangwana.
Uye ndozvakaita nyore kuwana yako IMEI. Zvinogona kunge zvakasiyana kune mamwe maOppo modhi asi iwo hunhu hwaizove hwakafanana. Ingoongorora uye uwane foni yako.
Samsung Galaxy J2 Prime (Uye mamwe Samsung Smartphones)
Kune Samsung Galaxy Series, imwe nhanho yehurefu maitiro uchienzaniswa neOppo foni. Nekudaro, iwe uchazofanirwa kusvika kune zvakada kufanana marongero. Ngatitange!
Enda kune chako chishandiso Settings
Mune zvigadziriso zvefoni yako, peta pasi wotsvaga Nezve mudziyo
yokuritora pamusoro chinzvimbo
Zvichienderana nebasa rako, unogona kunge uchitoona yako IMEI ruzivo. Kana usingaone izvozvi, pfanya pane IMEI ruzivo
Iye zvino iwe unofanirwa kunge uchiona iyo IMEI ruzivo rwefoni yako. Kune maviri dhivhaji anogonesa simidzwa, iwe uchaona mbiri IMEI nhamba.
Tarisa uone IMEI ruzivo urwo urikuona
Samsung zvishandiso dzinenge dziine UI yakafanana saka nhanho dziri pamusoro hadzizoshanduke zvakanyanya. Sezvandataura, ingoongorora chishandiso chako uye uchaona mamiriro acho pasina nguva.
Nezvese zvimwe mudziyo, uchangoda kuenda kuZvirongwa. Kana iwe uchinge uchinge uri mune zvigadziridzo, iwe unofanirwa kutsvaga Nezve mudziyo or Ruzivo rwekushandisa. Pane misiyano pane izvi, asi iwe uchango tarisa chinzvimbo or IMEI ruzivo. Iwe unozogona kuona zvigadziro zviri nyore nekungotarisa mumamiriro ako.
Kune vese vanogadzira mbozhanharembozha, kunyange hazvo, ivo kazhinji vanoisa tsvimbo ine IMEI yefoni iri mubhokisi pachayo. Dzimwe nguva iyo IMEI ruzivo richava mukati mebhokisi. Asi sekutonga kwemunwe, panogona kuve nekopi yepanyama yeIMEI kumwe kunebhokisi, parutivi neruzivo rwuri mukati mefoni pachayo. Kuchengeta bhokisi rako kunogona kunge kuri kunetsa asi zvakadaro, zvakakosha kuti uchengete backup yeIMEI yako. Unobvunzirei? Heano mabhenefiti.
Zvakanakira Kuchengeta Backup yeIMEI yako
Saka unogona kunge uchibvunza, "Ndine IMEI yangu. Manje chii? ". Zvakanaka, ingo chengetedza iyo nhamba uye yakachena. Kana iwe uri mukuenzanisa chako chigadzirwa, iwe unogona kusvika padanho rekuti IMEI yako ruzivo inogona kubviswa pane yako kifaa. Kana iwe uine backup yeIMEI yako nhamba, saka kuidzosera zvakare pafoni yako kungave kuri nyore.
Iyo IMEI pafoni yako inokosha nekuti, pasina IMEI, foni yako haizokwanisi kunyoresa kune network. Izvi zvinoreva kuti haungakwanise kutora uye kugamuchira mafoni. IMEI ndiyo inobatsira maseru network makambani kutsvaga uye kuona foni yako kuti aise parutivi kubva kune zvimwe zvinoshandiswa. Kana IMEI yako ichifanana neimwe foni, iwe uchave nenguva yakaoma.
Chekupedzisira, iyo IMEI inokutendera kuti uchengete njanji yefoni ipi ndeipi. Kana iwe ukambove muboka revanhu vane foni yakafanana newe, iwe haazove nematambudziko ekuwana foni yako. Rangarira, iyo IMEI idhaidha yakasarudzika saka hapana munhu achagovana zvakafanana IMEI zvirevo sewe.
IMEI inonzwika senge chinhu chidiki, uye iwe unogona kunge uchikwanisa kurarama hupenyu hwako pasina kutsvaga kuti chii chinonzi IMEI kana kuti chii Midziyo yako IMEI iri. Nekudaro, zvinobhadhara kuti uzive mashandiro emukati mefoni. Iyo inobatsira iwe kuziva imwe yakasarudzika nhamba inongori pafoni yako uye haungazove nematambudziko ekuzivisa foni yako kubva kumabhiriyoni vamwe vari kutenderera nyika nhasi.
Uye chaizvo inotonhorera hurukuro yekutanga kana iwe uchida kuputsa barafu kumapati!
Ko gwaro iri rakakubatsira iwe here? Rega ndidzidze mumashoko acho!
Filed Under: imei